February 2021 - Celefans
ပြည်သူကို မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်တိုက်သည့် ရဲငါးဦးကို ရပ်ကွက်က ဖမ်းထား
February 28, 2021 Cele Fans Comments Off on ပြည်သူကို မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်တိုက်သည့် ရဲငါးဦးကို ရပ်ကွက်က ဖမ်းထား
မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း၊ ၁၀၇ A လမ်းပေါ်ရှိ လူတစ်ဦးကို လိုက်တိုက်သည့်အိမ်စီးမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကို ပြည်သူတို့ ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးရာမှ လက်နက်အချို့ကိုပါ သိမ်းဆည်းရမိသည်ဟု သိရသည်။ ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈) နံနက်ပိုင်းအတွင်း မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ပြုလုပ်နေသည့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းများ၏ အထွေထွေသပိတ်ကို စစ်ကောင်စီ၏ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ပိတ်ဆို့ထားစဉ် ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းမကြီးပေါ်တွင် မောင်းနှင်လာပြီး ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ငါးဦးလိုက်ပါလာသည့် Toyota Mark II ယာဉ်တစ်စီး ၁၀၇ […]
ကုလသမဂ္ဂမြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ သမိုင်းဝင်တင်ပြချက်
February 26, 2021 Cele Fans Comments Off on ကုလသမဂ္ဂမြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ သမိုင်းဝင်တင်ပြချက်
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကျဆုံးပြီး အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်လို့ လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်က အစည်းအဝေးမှာပြောသွားပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ကာလတွေမှာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပြောဆိုသွားတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ တင်ပြချက်နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုသွားတာကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဦးကျော်မိုးထွန်း နယူးယောက်မြို့ ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင် ဆန္ဒပြ စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့က ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကျဆုံးပြီး အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်လို့ […]
ဖခင်ဖြစ်သူက စစ်သားဖြစ်နေလို့ မိဘအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာလိုက်တဲ့ သားဖြစ်သူ ဆရာဝန်လေး
February 25, 2021 Cele Fans Comments Off on ဖခင်ဖြစ်သူက စစ်သားဖြစ်နေလို့ မိဘအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာလိုက်တဲ့ သားဖြစ်သူ ဆရာဝန်လေး
ဖခင်ဖြစ်သူက စစ်သားဖြစ်နေလို့ မိဘအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာလိုက်တဲ့ သားဖြစ်သူ ဆရာဝန်လေး ဖခင်ဖြစ်သူက စစ်သားဖြစ်နေလို့ မိဘအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြောင်းကြေငြာလိုက်တဲ့ သားဖြစ်သူ ဆရာဝန်လေး လားရှိုးမြို့နေ ပြည်သူများ ကျွန်တော်၏အပေါင်းအသင်းများနှင့် ဦးဇော်ဝမ်း(အဖေဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ) သိစေရန် ကျွန်တော် ဒေါက်တာစိုင်းကောင်းထက်ဇော် ၏ ဖခင်အရင်းဖြစ်သူ တကက ဇော်ဝမ်း (ထောက်လှမ်းရေး ၉-(ငြိမ်း)) သည် ယခု အချိန်ကာလတွင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူ ဖြစ်သည့်အပြင်..မင်းအောင်လှိုင်၏လုပ်ရပ်အား မှန်ကန်သည်ဟု ထောက်ခံနေပါသည်။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ […]
တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း 25.2.2021 မှ 3.3.2021 အထိ
February 25, 2021 Cele Fans Comments Off on တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း 25.2.2021 မှ 3.3.2021 အထိ
တနင်္ဂနွေ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းစီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများ နားမလည်ပါက ရှေ့ဆက်မတိုးလိုက်ပါနဲ့။ အလိမ်အညာခံရ၍ ဆုံးရှုံးရကိန်းများ ရှိနေမည်။ ဝန်ထမ်းဆိုတရားမဝင်ငွေကြေးနှင့်မရိုးမသား လုပ်ကိုင်ရခြင်းများ ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတတ်သည်။ လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်အဓိပ္ပါယ်မဲ့၊ အကျိုးမဲ့စွာ၊ သတ္တိလွဲများ မွေးမိသဖြင့် မကောင်းသော ဆိုးကျိုးများနှင့် အတိဒုက္ခရောက်ရတတ်သည်။ တတ်နိုင်သမျှခရီးရှောင်စေချင်ပါတယ်။ ခရီးသွား လာရင်းအမှုပြဿနာများကြုံတွေ့လာရတတ်သည်။ အိမ်ပြောင်း၊ နေရာပြောင်း၊ အလုပ်ပြောင်းကဲ့သို့သော အပြောင်း အလဲကိစ္စများကြုံရတတ်ပါတယ်။ ထီပေါက်ချင်ပါက အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်စပ်တူထီထိုးပါ။ မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း၊ ဆရာသမားကောင်းများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခွင့်ရ၍ လုပ်ငန်းစီးပွားများ […]
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့် ပြောပြီ . . .
February 24, 2021 Cele Fans Comments Off on သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့် ပြောပြီ . . .
သမ္မတကို လိုင်းပေါ်က ရုံးထုတ်ရာမှာ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က သူဟာတရားဝင်သမ္မတဖြစ်လို့ ၂၀၀၈ ခြေဥအရ တရားရုံးက အမှုစစ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း တရားရုံးကို အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ဒါ့ကြောင့် ရှေ့နေမလိုကြောင်း သူ့ကို လွှတ်တော်ကသာ တရားဝင်ဖြုတ်ချခွင့်ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့လို့ တရားသူကြီးက အမှုကို အထက်ကို ဆက်တင်ပြဖို့ ရက်ချိန်းလိုက်ပါတယ်။ တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးများထဲက ဒီမိုကရေစီအစိုးရက ခန့်ခဲ့တဲ့ တရားသူကြီးများကိုလဲ စစ်အာဏာသိမ်းသူက သူတက်အပြီးမှာ ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ကတော့ ဆက်စစ်ခိုင်းမှာပါ။ သမ္မတကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ ပြောလိုက်ပါပြီ။ ဒီအမှုကို […]
အနိုင်ရသူပြန်လာမှ ရုံးပြန်တက်တော့မယ့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်း ၂၉ ယောက်
February 23, 2021 Cele Fans Comments Off on အနိုင်ရသူပြန်လာမှ ရုံးပြန်တက်တော့မယ့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်း ၂၉ ယောက်
အနိုင်ရသူပြန်လာမှ ရုံးပြန်တက်တော့မယ့် ကလေးမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်း ၂၉ ယောက် ကလေး-ဖေဖေါ်ဝါရီ-၂၂-၂၀၂၁ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာချိန် ဒါမှမဟုတ် ရုံးပြန်တက်ရက်ကြေငြာမှသာ ရုံးပြန်တက်တော့မယ်လို့ CDM မှာ ပါဝင်ကြတဲ့ ကလေးမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က ဘဏ်ဝန်ထမ်း ၂၉ ဦးက သဘောထားကြေငြာချက်ကို ဒီကနေ့ပဲ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ၂၉ ဦးဟာ တစ်ချို့ရက်တွေမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ စစ်အာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကနေ ဖုန်းဆက်ခေါ်တာအပြင် နေအိမ်တွေထိ လိုက်လံခေါ်ဆောင်‌နေတာကြောင့် […]
KBZ Bank မှ ငွေများများထုတ်ချင်သူတွေ အတွက်
February 23, 2021 Cele Fans Comments Off on KBZ Bank မှ ငွေများများထုတ်ချင်သူတွေ အတွက်
🔘ATM တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ငွေဖြည့်ပေးနေပါတယ် စက်တိုင်းက ကိုင်တဲ့ဘဏ်ခွဲမတူတဲ့အတွက် ဘယ်စက်မှာ ငွေရှိမယ်ဆိုတာတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါ 🙏 ATM မှာ ငွေလက်ကျန်နည်းနေပီဆိုတာနဲ့ တာဝန်ခံတွေက တန်းသိတာမို့ မပူပါနဲ့ ထပ်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ် 😌 🔘ATM Card နဲ့ တနေ့ကို 10သိန်း ( တခါထုတ် ၃သိန်း ) ထုတ်လို့ရပါတယ် -Card to card transfer 15သိန်းရပါတယ် အဲ့တော့ […]
February 23, 2021 Cele Fans Comments Off on ထူးခြားတဲ့မင်္ဂလာသတင်း….
“မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး”ဆရာတော်ကြီးက… သူ့ထံ မည်သူမျှ လုံးဝမလာရဟုမိန့်ခဲ့သည်မှာ ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်​ ။ ယခုအခါ…လာမည့်တပေါင်းလမှ စ၍မင်းဘိသိက်ခံ လက်ရှိ ​စေတီကိုအတောင်၁၈၀ပြန်မြှင့်ရန်မိန့်ကြားထားကြောင်း သိရှိရပါသည် ။ လွန်ခဲ့သည့် ၂လဝန်းကျင်ခန့်ကလည်းလာမည့် တပေါင်းပွဲ အတွက်…..လားဟူ လီရှောများ က ရန်အတွက်ဇာတ်စင်ဆောက်ခိုင်းထားသည်ဟုအနီးကပ် တကာတစ်ဦးက ဖုန်းဆက်ပြောပြီး …. ဇာတ်စင်ဆိုတော့ ​ပျော်ရရွှင်ရမဲ့ သဘောလို့သူကောက်ယူကြောင်းပြောပါသည်။ “တို့် ​တောထဲဝင်တာ အလကားမဟုတ်သာသနာအတွက် ​ဝေနေယျအတွက်ရဟန္တာသည်စင်္ကြဝဠာတထောင်ကို သိမ်းကြုံးရိုက်ဖွင့်နိုင်၏ သာသနာအတွက်ကားပြောစရာမလို”ဟု ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ခဲ့ဘူးရာ……တပေါင်းလကျော်လျှင်တိုင်းပြည်သာသနာနှစ်ဖြာကောင်းပါလိမ့်မည်… ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးမျှော်နိုင်ကြတော့မည့် အချိန်ရောက်လာတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ […]